Zonke izindiza zikhanseliwe, amachweba avaliwe njengoba abakwaShanghai belungiselela iTyphoon Chanthu
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-China Breaking News » Zonke izindiza zikhanseliwe, amachweba avaliwe njengoba abakwaShanghai belungiselela iTyphoon Chanthu
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-China Breaking News • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba • Ukuhamba Kwezitimela • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba Ezihlukahlukene
Zonke izindiza zizokhanselwa ePudong International Airport ngemuva kuka-11: 3 ngoMsombuluko ngenxa yesimo sezulu, ngenkathi zonke izindiza ezinqamula esikhumulweni sezindiza saseHongqiao entshonalanga yedolobha zizophinde zichithwe ngemuva kwehora lesithathu ntambama ngosuku olufanayo, ngokusho kwesimemezelo seShanghai Airport Authority NgeSonto ebusuku.
Ukusebenza kwesitsha kumiswe ethekwini laseShanghai.
Zonke izindiza zikhanseliwe ePudong International Airport yaseShanghai.
Isishingishane uChanthu kulindeleke ukuthi sihlasele eShanghai ngoMsombuluko ebusuku.
Esitatimendeni esikhishwe namhlanje, iShanghai International Port Group imemezele ukuthi itheku lamakhonteyina laseShanghai limise ukusebenza okuhlobene nezitsha, njengoba kulindeleke ukuthi iTyphoon Chanthu iwele engxenyeni eseningizimu yedolobha ngoMsombuluko ebusuku.
AbakwaNingbo Meidong Container Terminal Co esifundazweni esingumakhelwane iZhejiang bamise ukusebenza kwemishini ethile kusukela ngoLwesihlanu, kusho inkampani izolo nge-akhawunti yayo wechat.
Ukusebenza ezikhumulweni ezinkulu zamachweba ethekwini iZhoushan - okuyikhaya lamathangi amakhulu okugcina uwoyela kanye nezinto zokuhlanza - kumisiwe kusukela ngoMgqibelo ntambama.
Ukuvalwa kwetheku kungenzeka kuqhubeke nokubambezela ukuthunyelwa futhi kulimaze amaketanga wokuphakelwa komhlaba, asevele elwela ukubhekana nokuthunyelwa kwerekhodi okuvela eChina kanye nemiphumela yokuqubuka kwendawo kwe-COVID-19.
Futhi, zonke izindiza zizokhanselwa kwaShanghai Isikhumulo sezindiza Pudong International ngemuva kuka-11: 3 ngoMsombuluko ngenxa yesimo sezulu, ngenkathi zonke izindiza ezinqamula esikhumulweni sezindiza saseHongqiao entshonalanga yedolobha zizophinde zilahlwe ngemuva kwehora lesithathu ntambama ngalo lolo suku, ngokusho kwesimemezelo seShanghai Airport Authority ngeSonto ebusuku.
Shanghai Uhulumeni umemezele ukuthi uzovala zonke izinkulisa nezikole zamabanga aphansi ngoMsombuluko ntambama nangoLwesibili, ngenkathi eminye imizila engaphansi komhlaba imisiwe futhi amapaki nezinye izindawo zokuvakasha ngaphandle zivaliwe ngoMsombuluko nangoLwesibili.
Isifundazwe saseZhejiang sithuthukise ukusabela okuphuthumayo kuChanthu ezingeni eliphezulu ngeSonto, savala izikole kanye nokumisa izinsiza zomoya nezitimela emadolobheni amaningi, ngokusho kwesikhulu sezindaba iXinhua. Iziphathimandla ziphinde zamisa ezinye izinsiza zezitimela ezinejubane elikhulu eYangtze River Delta.